मध्य भोटेकोशीको आईपीओ भोलिदेखि बिक्री खुला, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ? « Artha Path
मध्य भोटेकोशीको आईपीओ भोलिदेखि बिक्री खुला, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले भोलि (असोज २० गते, मंगलबार) देखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले ९० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ९० लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको हो । जसमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ६० हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र बाँकी ८१ लाख ९० हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
कम्पनीको आईपीओमा असोज २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा कात्र्तिक ३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कमपनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १० हजार कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन पाइनेछ ।
पछिल्लो समय जुनसकै कम्पनीको आईपीओमा २० लाखभन्दा बढीले आवेदन दिने गरेका छन् । त्यसैले यस कम्पनीको आईपीओ १० कित्ताका दरले बाँडफाँड गर्ने हो भने ८ लाख १९ हजार आवेदकले पाउनेछन् ।